I-Fortran Imbali yoLwimi lweeNkqubo
ULwimi lokuQala loPhuhliso lweNqanaba eliphezulu
"Andizange ndiyazi ukuba isihogo endifuna ukuyenza ngobomi bam ... Ndathi, hayi, ndandingenako.Ndikhangele i-sloppy kwaye ndixakekile. . " - UJohn Backus ngolwazi lwakhe lwendlebe nodliwano-ndlebe lwe- IBM .
Yayiyini iFranran okanye i-Speedcoding?
I-FORTRAN okanye ukuguqulelwa kwefomula kwakuyiilwimi yokuqala yeprogram yeprogram (software) eyenziwe nguJohn Backus ye-IBM ngo-1954, kwaye yakhululwa ngokurhweba ngo-1957.
I-Fortran isasetyenzisiwe namhlanje ukulungiselela iinkqubo zesayensi kunye nezibalo zeemathematika. I-Fortran yaqala njengenguqukidi yedijithali ye-digital ye- IBM 701 kwaye yayibizwa ngokuba yi-Speedcoding. UJohn Backus wayefuna ulwimi lweprogram olusondele ngakumbi ekubonakaleni kolwimi loluntu, leyo yintetho yeelwimi eziphezulu, ezinye iinkqubo zeelwimi eziphakamileyo ziquka iAda, i-Algol, i- BASIC , iCOBOL, iC, i-C ++, i-LISP, i-Pascal kunye neProlog.
Isizukulwana sokuqala seefowuni ezisetyenziselwa ukucwangcisa imisebenzi yekhompyutha yayibizwa ngokuba ulwimi lomatshini okanye ikhowudi yomshini. Ikhowudi yomshini ngolwimi i-computer eyiqonda ngokwenene kumgangatho womatshini, ngokulandelelana kwee-0 kunye nee-1 ezilawulwa yikhomputha njengemigaqo yombane.
Isizukulwana sesizukulwana sesibini sabizwa ngokuba yintlangano yolwimi. Ulwimi lweeNdibano luphendulela ukulandelwa kwee-0s kunye ne-1 kumazwi omntu afana 'nokongeza'. Ulwimi lweNdibano luhlala luguqulelwa kwi khowudi yomshini ngeenkqubo ezibizwa ngokuba ngabahlanganisi.
Isizukulwana sesithathu sekhowudi sabizwa ngokuba yilwimi ephezulu okanye i-HLL, enegama lomntu ozwakalayo kunye ne-syntax (njengamazwi kwisivakalisi). Ukuze ikhompyutha iqonde nayiphi na i-HLL, i-compiler iguqulela ulwimi oluphakamileyo kwiilwimi zamashishini okanye ikhowudi yomshini. Zonke iilwimi zokufunda kufuneka zigqityiwe ziguqulelwe kumkhodi womatshini ukuba ikhompyutha isebenzise imiyalelo equlethe kuyo.
UJohn Backus uhamba neqela le-IBM labaphandi, kwi-Watson Scientific Laboratory, eyakha iFranran. Kwiqela le-IBM laziwa ngamagama aqhoshayo oososayensi; U-Sheldon F. Olungcono, uHarlan Herrick (uHarlan Herrick waqalisa inkqubo yokuqala ye-Fortran ephumelelayo), uPeter Sheridan, uRoy Nutt, uRobert Nelson, u-Irving Ziller, uRichard Goldberg, uLois Haibt noDavid Sayre.
Ikomiti ye-IBM ayizange iqulunqe i-HLL ​​okanye ingcamango yokuqulunqwa kolwimi kwinkqubo yomshini, kodwa iFranran yayiyi-HLL ​​yokuqala yokuphumelela kunye ne-Fortran I i-compiler igcina irekhodi yokuguqula ikhowudi iminyaka engaphezu kwe-20. Ikhompyutheni yokuqala ukuqhuba i-compiler yokuqala yayiyi-IBM 704, eyayixhaswa nguJohn Backus.
I-Fortran ngoku sele idlula iminyaka engamashumi amane ubudala kwaye ihlala ilwimi ephezulu kwinkqubo yesayensi kunye neyeshishini, ngokuqinisekileyo, ihlaziywa rhoqo.
Ukuqulunqwa kweFranran kwaqalisa i-software yezixhobo zekhompyutha ze-dollar ezingama-24 zezigidi ze-computer kwaye kwaqala ukuphuhlisa ezinye iilwimi zeeprogram eziphezulu.
I-Fortran iye yasetyenziselwa ukulungiselela imidlalo yevidiyo, iinkqubo zokulawula izithuthi zomoya, izibalo zokubhalwa kwee-payroll, ezininzi iinkqubo zesayensi kunye nezempi kunye nophando lwekhompyutha olufanayo.
UJohn Backus wanqoba i-1993 National Academy of Engineering kaCharles Stark Draper Prize, umvuzo ophezulu kakhulu welizwe owanikezelwa ngobunjineli, ukuveliswa kwe-Fortran.
Isahluko isahluko se-GoTo, incwadi kaSteve Lohr kwimbali yesofthiwe kunye neprogram yeprogram, ehlanganisa imbali yaseFranran.
Imbali ye HTML
Imbali engaqhelekanga yeMicrosoft Windows
Imbali ye-Floppy Disk
Ukubeka iMicrosoft kwiMaphu
Ngubani owafaka iMicchipchip?
Imbali ye-Facebook kunye nendlela eyafakwa ngayo
Ukufunda ukuFaka i-Standard Transmission Made Easy
Indlela Yokuqalisa Umxholo: 13 Ukuzibandakanya
Ukujongana nokulimala kwe-Ice ne-Snow kwiMithi
Ich bin ein Berliner-IJelly Donut Myth
Ukuqonda ukuba Ziziphi iimbumba zeBlue Humor
Iingcebiso zeNcwadi zeeNdlu ezahlukeneyo
Kutheni iingubo ziguqa?
Umzobo wokuThola amaRomance kunye neMitshato
Iimpawu ezisibhozo zobuBuddha